सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभाका दश स्थानिय तहले विभिन्न किसिमका सवारी साधन खरिदमा झण्डै तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउने भन्दै स्थानीय तहको मोटो बजेट गाडी खरिदमा खर्च भएको छ । सबै स्थानीय तहको गरी कूल दुई करोड ८२ लाख १९ हजार ४४८ रुपैयाँ गाडी खरीदमा खर्च भएको पाइएको छ ।
खाँदबारी नगरपालिकाले स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधि आए पश्चात ३० लाखमा एउटा बोलेरो गाडी खरीद गरेको छ । नगरपालिकाले ३८ लाख २५ हजारमा एउटा ब्याकोलोडर पनि खरिद गरेको नगरपालिका स्रोतले बतायो । खाँदबारी नगरपालिकामा यस अघि नै दुईवटा गाडी सञ्चालनमा छन । अहिले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको लागि जम्मा तीनवटा गाडी सुचारु भएको नगरपालिकाले बतायो ।
चैनपुर नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि आएपश्चात फिल्ड हिड्न सजिलो हुने भन्दै ५ लाखको लागतमा होन्डाको एक थान मोटरसाइकल खरिद गरेका छ भने पुरानो टाटाको एउटा गाडी सञ्चालनमा रहेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन निरौलाले बताए ।
मादि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत आनन्दराज पोख्रेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा महिन्द्राको एउटा गाडी २३ लाख ८५ हजारमा खरिद गरिएको छ ।
जिल्लाको धर्मदेवी नगरपालिकाले ३२ लाख ६० हजारको लागतमा महिन्द्राको एउटा गाडी खरिद गरेको छ । त्यस्तै धर्मदेवी नगरपालिकाले मेयरको प्रयोजनको लागि भन्दै २ लाख ५५ हजार ४ सयमा यमाहाको एक मोटरसाइकल र उपमेयरको प्रयोजनको लागि भन्दै यमाहाको एक स्कुटर १ लाख ७४ हजार ४ सयमा खरिद गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जितमान जिमीले बताए । जिमीका अनुसार २ लाख १७ हजार ९ सयका दरले ८ वटा मोटरसाइकल १७ लाख ४३ हजार २ सयको लागतमा खरिद गरिएको छ । जुन हाल ३ वटा मोटरसाइकल नगरपालिका कार्यालयमा रहेको छ भने अन्य ५ वटा मोटरसाइकल वडाको प्रयोजनको लागि सुचारु छन् । त्यस्तै सो नगरपालिकाले ३९ लाख ३४ हजारमा एक जेसिबि पनि खरिद गरेको छ ।
पाँचखपन नगरपालिकाले ३७ लाखको लागतमा एउटा गाडी खरिद गरेको थियो । गाडी केहि दिन अघि दुर्घटनामा परेर सञ्चालन नहुने अवस्थामा छ । त्यस्तै २ लाख ५० हजारका दरले ८ थान मोटरसाइकल पनि नगरपालिकाले खरिद गरेको नगरपालिकाका सुचना अधिकारी प्रेम ब. श्रेष्ठले जानकारी दिए । ८ वटा बाइकको कुन लागत २० लाख हुन आउछ । ति मोेटरसाइकल मध्ये वडामा ५ थान सञ्चालनमा रहेका छ भने नगरपालिका कार्यालयमा ३ थान सुचारु छन् । सुचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार नगरपालिकाले ४५ लाखमा एक जेसिबि पनि खरिद गरेको छ ।
उता जिल्लाको चिचिला गाउँपालिकाले २ लाख ६५ हजार ९ सयको लागतमा एक थान होन्डा मोरसाइकल खरिद गरेको छ भने २ लाख ५६ हजार ५ सय ४८ को लागतमा एक पल्सर मोटरसाइकल खरिद गरेको गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी राजेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए । घिमिरेका अनुसार २ लाख १६ हजार ४ सयका दरले कुल ८ लाख ६५ हजार ६ सयको ४ वटा यमाहाको मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ ।
मकालु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लवहाङ राईका अनुसार २ लाख ४० हजारका दरले कुल ४ लाख ८० हजारको २ थान मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । मकालु गाउँपालिका खडि खरिदको प्रकृयामा रहेको छ । गाडि खरिदको लागि पैसा छुटाइएकोले चाडै नै गाडी पनि खरिद गरीने राईले जानकारी दिए ।
सभापोखरी गाउँपालिकाले ३ थान मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी गायत्री बाह्रकोटीका अनुसार २ लाख ३९ हजार, ४ लाख ७५ हजार र २ लाख ५० हजार गरी कुल ९ लाख ६४ हजारको लागतमा तीन थान मोटरसाइकल खरिद गरीएको छ । हाल सभापोखरी गाउँपालिकामा ६ वटा मोटरसाइल सुचारु अवस्थामा छन । तीन थान मोटरसाइकल साविक गाविस हुदाँ नै खरिद गरिएको थियो । त्यस्तै सभापोखरी गाउँपालिका गाडी खरिदको प्रकृयामा रहेको छ । अब केहि समयमा नै गाउँपालिकामा गाडी ल्याइने सुचना अधिकारी बाह्रकोटीले बताए ।
जिल्लाको दुर्गम भनेर चिनिने शिलिचोङ गाउँपालिकाले २ लाख ८५ हजारको दरले ३ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मोहन प्र. निरौलालका अनुसार कुल ८ लाख ५५ हजारको मोटरसाइकल खरिद गरिएको हो । गाउँपालिकामा हाल पाँच वटा मोटरसाइकल सुचारु अवस्थमा रहेको छ ।
सङ्खुवासभाको सबैभन्दा दुर्गम भनेर चिनिने भोटखोला गाउँपालिकाले भने हाल सम्म कुनै पनि सवारी खरिद गरेको छैन । गाउँसभाले ३ वटा मोटरसाइल खरिदको लागि पास गरेपनि खरिद प्रकृया नै सुरु नभएको गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी दावा लामाले बताए । लामाका अनुसार पुरानो ४ वटा मोटरसाइकल भए पनि सदरमुकाम खाँदबारीमा नै रहेका छन् । बाटोको कारणले सो बाइक गाउँपालिका लैजान नसकिएको उनले बताए । यातायातका साधन आवश्यक भए पनि आवश्यकताभन्दा बढीमात्रामा किनिनुले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विलाशी र भोगी हुँदै गएको सर्वसाधारणले गुनासो गर्न थालेका छन् ।